Sida loo bixiyo hadal
Ogow sida hadal loogu soo jeediyo Golaha Deegaanka (Metro Council) qaab fool-ka-fool, boostada ama qatka internetka ah. Tilmaamahan waxay xaqiijinayaan in qof walba uu fursad u leeyahay in la dhegeysto.
Kaasoo lagu xaqiijinaayo goobaha Metro oo ah kuwo amaan iyo soodhawayn eh
Bayaan Kasoobaxay Madaxwaynaha Gudigga Metro Tom Hughes.
Habdhaqanka Metro ee raacdeynta iyo baadhista cabashooyinka takooriksta ee Title VI iyo kuwa kale
Habdhaqanadan waxa lagu dabaqayaa dhammaan cabashooyinka la xereystay ee hoos taga Title VI ee Xeerka Xuquuqda Madaniga ee 1964 iyo qodobada la xidhiidha, ee ku saabsan barnaamij kasta oo uu maalgaliyo federalku ama hawlgal ay maamulaan Metro ama cid hoos tagta, la-taliyeyaasheeda, ama qandaraasleyaasheeda.
Foomka Cabashada Takoorista ee Metro
Fiiro: Waxa aanu ku weydiisanaynaa macluumaadka soo socda si uu nooga caawiyo in laga shaqeeyo cabashadaada. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomkan ama warqaddan wac 503-813-7514.